Ngabe izifundo ezingama-24 ezikhokhelwa i-Coke mayelana nokukhuluphala kwengane kwehlulekile ukudalula ithonya likaCoke? - US Ilungelo Lokwazi
Ngabe Izifundo Ezixhaswe Ngama-Coke Angu-24 Ngokukhuluphala Kwezingane Kwehlulekile Ukudalula Ithonya LeCoke?
Posted on December 11, 2017 by UGary Ruskin
Ukukhishwa Ngokushesha: NgoMsombuluko, Disemba 11, 2017
Kwakunembe kangakanani ukudalulwa kwezintshisekelo okungenani ezifundweni ezingama-40 zokukhuluphala kwezingane ezixhaswe yiNkampani yeCoca-Cola? Akunembile kangako, ngokusho kwephepha eshicilelwe kwi-Journal of Public Health Policy lokho kuhlaziye izifundo ezivela kwi-International Study of Childhood Obesity, Lifestyle and the Environment (ISCOLE), exhaswe ngemali engu- $ 6.4 million evela kwaCoca-Cola.
Ucwaningo lwe-ISCOLE luthole ukuthi ukungasebenzi komzimba kuyindlela ephambili yokukhuluphala kwengane. ICoca-Cola kubukeka sengathi ixhase futhi iphromotha ucwaningo oluhlanganisa ukukhuluphala kwengane ngezimbangela ngaphandle kokusetshenziswa kwesoda.
Ezifundweni ezingama-24 ze-ISCOLE, ukudalulwa kwe-COI kubika lokhu, noma okuhlukile okuseduze: “I-ISCOLE ixhaswe yiNkampani yeCoca-Cola. Umxhasi ocwaningayo akananxaxheba ekwakhiweni kocwaningo, ekuqoqweni kwedatha, ekuhlaziyweni, eziphethweni noma ekushicilelweni. Okudingekayo kuphela kwabaxhasi ukuthi lolu cwaningo lube semhlabeni wonke. ”
Kodwa-ke, isicelo se-Freedom of Information Act se-US Right to Know, iqembu elibheka imboni yezokudla, siveze ubufakazi obukhombisa ukuthi uCoca-Cola ube nomthelela ekwakhiweni kwezifundo, kuphakama imibuzo ngethonya lenkampani nokuba neqiniso emaphepheni axhaswe yiCoke.
"Kubukeka sengathi ososayensi abaningi be-ISCOLE abalibalanga ngokuphelele izinga lokubandakanyeka kukaCoca-Cola ezifundweni zabo zokukhuluphala ebuntwaneni," kusho uGary Ruskin, umqondisi obambisene ne-US Right to Know. "Lokhu kuphakamisa imibuzo hhayi kuphela ngalezi zifundo ezixhaswe yi-Coke, kepha futhi kuvame ukubhekisisa ukunemba kokungqubuzana kokudalulwa kwezintshisekelo kwezinye izifundo zesayensi ezixhaswe izinkampani."
"Okuvezwa yila ma-imeyili ukuthi zingqubuzana kanjani izingxabano zezintshisekelo nokuthi zilawulwa kabi kanjani njengamanje," kusho uDavid Stuckler, uProfesa esikhungweni i-Research Centre Dondena, eBocconi University. "Kunengozi yokuthi izintshisekelo ezinjengeCoca-Cola zingcolisa izincwadi zesayensi ngocwaningo olusebenzisa uhlelo olufihlekile."
"Eminyakeni yamuva nje, izinkampani ezinkulu bezilokhu zifuna ukunciphisa ukukhathazeka ngezingxabano zentshisekelo ocwaningweni oluzixhasayo," kusho uMartin McKee, uProfesa Wezempilo Yomphakathi waseYurophu eLondon School of Hygiene & Tropical Medicine. Isibonelo sakamuva yi- Isimemezelo saseBrussels, ethi “izingxabano zezentengiselwano zezintshisekelo kulula ukubhekana nazo uma zimenyezelwe kahle ”. "Njengoba iphepha lethu likhombisa, isimo empeleni siyinkimbinkimbi kakhulu futhi kunesidingo sokuqapha okukhulu," kusho uMcKee.
Mayelana nama-imeyili e-ISCOLE atholwe yi-FOIA, iphepha le-Journal of Public Health Policy liyabika:
Ama-imeyili akhombisa ukuthi abacwaningi babonisana futhi bafaka abamele i-Coca-Cola ekwenzeni izinqumo zamasu mayelana nokuklanywa kokufunda. Ezigabeni zokuqala zokuhlela lolu cwaningo, isibonelo, amaqembu aphikisana ngokuthi yimaphi futhi mangaki amazwe okufanele afakwe. [Isikhulu Esiphezulu Sezesayensi Nezempilo saseCoca-Cola uRhona] Applebaum uthumele i-imeyili [Umphenyi Oyinhloko we-ISCOLE uPeter] Katzmarzyk ngomhlaka-26 Mashi 2012 ethi: “Kulungile-ke neRussia neFinland sineminyaka engu-13? Noma engekho eFinland futhi eneminyaka eyi-12. Ngokuzimisela – i-CEO yethu iyayizonda i- # 13 ”…. Uqhube wathi, “Ubucayi ngaleli bhizinisi eli-13. Asinayo i-FL [floor?] 13 eCoke ”. U-Applebaum ubuze uKatymarzyk: "Yiliphi elinye izwe okufanele sibheke kulo?", Waphendula wathi, "Kufanele nathi sikhulume ngeRussia — ngabe usunabo oxhumana nabo lapho?"
Iphepha le-Journal of Public Health Policy yabhalwa nguDavid Stuckler, uProfesa e-Research Center eDondena, eBocconi University, eMilan, e-Italy; UMartin McKee, uSolwazi Wezempilo Yomphakathi waseYurophu eLondon School of Hygiene and Tropical Medicine, eLondon, e-UK; noGary Ruskin, umqondisi-ndawonye we-US Right to Know, e-Oakland, California.